I-Website Design 2022 - AudienceGain
Idizayini Yewebhusayithi Eyisisekelo
INKAMPANI YEWEBSIGN DESIGN
I-AudienceGain yinkampani edumile nenedumela elihle lokuklama iwebhusayithi esebenza ngokukhethekile ekuhlinzekeni ngezinsizakalo ezishibhile zokuklama iwebhusayithi, amazinga e-SEO nokuhambisana kweselula. Inkampani inethimba le-IT elinamandla, ukucabanga kokudala, iminyaka eminingi yesipiliyoni emkhakheni wezobuchwepheshe bolwazi. I-AudienceGain ihlale ilalela futhi ibuqonda ubunzima bekhasimende ngalinye, lapho inkampani izonikeza khona izixazululo ezingcono kakhulu zokusiza amakhasimende aqiniseke ngokuphelele ngekhwalithi ngezindleko ezishibhile.
Yini I-Website Design?
Idizayini yewebhusayithi iyinhlanganisela yomsebenzi ovela ekwakhiweni kwesithombe, okuqukethwe kanye nesixhumi esibonakalayo sewebhusayithi ukubeka izithombe zolwazi zabantu ngabanye, izinhlangano namabhizinisi ku-inthanethi futhi bathole imali eyengeziwe. ngokufinyelela abangaba amakhasimende ku-inthanethi ngeWebhusayithi.
Iwebhusayithi iyisithombe, uhlobo, kanye nobuso bebhizinisi ku-inthanethi, ngakho ukwakha iwebhusayithi kuwumsebenzi obalulekile womuntu noma ibhizinisi ukuze kukhuliswe umkhiqizo wabo futhi kusekelwe ukuthengiswa kwe-inthanethi.
Izinzuzo zokuklama iwebhu
Esikhathini sobuchwepheshe 4.0, ukungabi nayo iwebhusayithi kuzokwenza kube nzima ngenkampani noma ibhizinisi lakho ukuncintisana nabanye ombangi. Ikakhulukazi lapho isimo esiwubhubhane sixakile, ukuthenga nge-inthanethi sekusebenze kakhulu kunangaphambili. Ukuba newebhusayithi yebhizinisi lakho eliku-inthanethi kuwumkhuba ongenakugwemeka webhizinisi lakho.
Isevisi yokuklama iwebhusayithi yochwepheshe iwukusiza amakhasimende anikeze umbono wesitayela sokusebenza sochwepheshe senkampani, isitolo, ibhizinisi, ngaphezu kwalokho, abasebenzisi banombono kusukela okokuqala lapho bevakashela iwebhusayithi yebhizinisi.
Ihlinzeka ngezindikimba zekhwalithi ze-WordPress ezimbonini ezahlukahlukene, kulula ukuzifaka, idizayini evamile ye-SEO, ehambisana nawo wonke amadivayisi.
PHEZU KWAWO YONKE i-SEO
Izinsizakalo ze-SEO ezisezingeni eliphakeme, i-AudienceGain yinkampani ehamba phambili ehlinzeka ngezinsizakalo ze-SEO zewebhusayithi zamabhizinisi.
Ukukusiza ukuthi wonge isikhathi nomzamo ukuze unakekele iwebhusayithi yakho, ubuyekeze okuqukethwe noma wenze ukuhlela okuyisisekelo. Okufanele ukwenze ukusethemba
UKULUNGISELELA NGESIVISHI SEWEBHUSI
Lungiselela isivinini se-Google PageSpeed ​​Insights. Yisebenzise ukusheshisa isayithi lakho le-WordPress, uthuthukise amazinga e-SEO, futhi wehlise amabhidi wezikhangiso ze-Google.
Izinsiza ze-SEO Entity kanye Nezokwakha Komphakathi zikusiza ukuthi ukhuphule ukwethenjwa kuwebhusayithi yakho futhi ukhuthaze amazinga angukhiye ngokushesha nangokuphepha.
I-HOSTING / VPS UKULUNGISWA ishibhile
Ukunikeza Ukusingathwa, I-VPS Engenamkhawulo, ikhwalithi ephezulu enedrayivu ye-SSD, ukufinyelela okusheshayo kwedatha ukuze udale isisekelo sokuthuthukisa Iwebhusayithi yakho.
Amaphakheji wesevisi ye-Professional Website Design
Sinikeza amaphakheji e-web design ngamanani ancintisanayo emakethe.
Dizayina ngokwethempulethi esitolo esibonakalayo
Igama lesizinda samahhala .com .net
Ukuphepha kwe-SSL: Yebo
Ukusingathwa Kwamahhala okunamandla aphezulu
Ulimi: 1 Ulimi
Ingxoxo ye-inthanethi ehlanganisiwe
Nikeza izindatshana ezi-5 - imikhiqizo eyi-10
Idizayini yamahhala yezibhengezo ezi-2 zephakheji lama-$200
Inikezela ngekhodi yomthombo
Iyasabela: Khombisa i-PC / Ithebhulethi / Ucingo
Iwaranti: Phakade Uma Usebenzisa I-AudienceGain Hosting
Dizayina ngokwethempulethi esekela ukuhlela
Igama lesizinda samahhala .com .com.vn
Izilimi: 2 Izilimi
Nikeza izindatshana ezi-8 - imikhiqizo eyi-20
Nikeza amadizayini ama-Banner angu-3
Idizayini ekhethekile ngesicelo
Igama lesizinda samahhala .vn .com.vn
Nikeza izindatshana ezi-10 - imikhiqizo eyi-30
Nikeza amadizayini ama-Banner angu-4
INQUBO YOKUSEBENZA YE-AUDIENCEGAIN WEB DESIGN COMPANY
I-AUDIENCEGAIN ihlale ilungiselela inqubo usuku nosuku ukuze umsebenzi uhambe kahle ukuze wonge izindleko zamakhasimende ngangokunokwenzeka. Sihlinzeka ngezinsizakalo zokuklama iwebhu emhlabeni wonke.
Thola izicelo futhi weluleke amakhasimende
Thola inhloso yekhasimende lapho lenza iwebhusayithi, thumela isampula yesikhombi esibonakalayo futhi weluleke isixhumi esibonakalayo esifanele.
Vala ukusebenzelana kwewebhu, caphuna futhi uthumele inkontileka
Ngemva kokuba ikhasimende livumele isifanekiso esibonakalayo, caphuna bese uthumela inkontileka ekhasimendeni ukuze liyireferensi.
Sayina inkontileka ukuze uthole kusengaphambili u-50% kumakhasimende
Izinhlangothi zombili ziyavumelana nemibandela yenkontileka, ziqhubeke nokusayina futhi zithole u-50% wemali yokuthuthukiswa kwewebhu ekhasimendeni.
Yenza ukuthuthukiswa kwewebhu ngaphansi kwenkontileka
Yakha iwebhusayithi ngokomugqa wesikhathi wenkontileka futhi ubonise imiphumela ngokuya ngenqubekelaphambili yewebhu. Hlola futhi uthumele imiphumela yokugcina.
Ukuhlolwa kokwamukela kanye nemiyalelo yokuthi usetshenziswa kanjani iwebhusayithi
Thola impendulo evela kumakhasimende, ukuhlela okuphelele nokwamukelwa. Imiyalo yokusebenzisa iwebhusayithi.
Iwaranti nokunakekelwa kwewebhusayithi ngesikhathi sokusetshenziswa kwesevisi
Iwaranti - ukunakekelwa - ukuhlela okuyisisekelo kwamakhasimende uma kuzibophezele ekusingatheni isikhathi eside.
Izifanekiso zokusebenzelana kwewebhusayithi ngomkhakha
Itimu ye-WordPress yokuthengisa
Itimu ye-WordPress yebhizinisi
Ukuhamba - Itimu ye-WordPress yehhotela
Itimu ye-WordPress yezemfundo
Izimonyo - Beauty WordPress Theme
I-WordPress Theme Interior - I-Architecture
Itimu ye-WordPress yemfashini
Ukudla - Medicine WordPress Theme
I-WordPress Theme News
IMIBUZO MAYELANA NEZINKONZO ZOKUDALA Iwebhusayithi
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuqedela ukwakhiwa kwewebhusayithi e-AudienceGain?
Ukwakhiwa kwewebhusayithi ukuqedwa ngokuvamile kuthatha cishe izinsuku eziyi-15-30 kuye ngosayizi, inani lezilimi nokuba yinkimbinkimbi komkhiqizo.
Singakanani isikhathi sewaranti uma usebenzisa isevisi yokuklama iwebhusayithi ye-AudienceGain?
Isevisi yewaranti yewebhusayithi inesikhathi esingu-01 kusukela ngosuku isizindalwazi esinikezwe ngaso. Ububanzi bewaranti buhlanganisa ukulungiswa kwamaphutha ewebhusayithi uma kukhona amaphutha uma kuqhathaniswa nezici zedizayini, amaphutha avela ngesikhathi sokusetshenziswa, nokuphepha kwewebhusayithi.
Ingabe idizayini yewebhusayithi ye-AudienceGain ine-invoyisi nenkontileka?
Inkinga amayunithi amaningi anentshisekelo kuyo ukuthi isevisi yokuklama iwebhusayithi i-invoyisi yini. Isizathu sokwakhiwa kwewebhusayithi sisohlwini lwezinsizakalo zesoftware ezingekho ngaphansi kwe-VAT, ngakho-ke udaba lwama-invoyisi kumakhasimende aluvunyelwe ukudonsa okukhiphayo kumabhizinisi. Futhi i-AudienceGain ingaqinisekisa ukuthi, lapho uklama iwebhusayithi noma usebenzisa ezinye izinsiza zewebhusayithi, amakhasimende azonikezwa ama-invoyisi e-VAT nezinkontileka.
Ngingakwazi ukushintsha isixhumi esibonakalayo esisha phakathi nokusetshenziswa? Ingabe lukhona usekelo lokuhlela noma lokwengeza ukusebenza?
Ngesikhathi sokusebenzisa, uma udinga ukushintsha isixhumi esibonakalayo noma uhlele imisebenzi eyengeziwe, i-AudienceGain izosekela ngentengo engcono kakhulu.
Ngakho konke okuhlangenwe nakho, ukuzinikela kanye nobungcweti, i-AudienceGain ngokuzethemba inika amabhizinisi isixazululo esingcono kakhulu sokwenza iwebhusayithi echwepheshile ideisgn.
© 2016-2022 AudienceGain - Isixazululo Sabadali Bokuqukethwe